‘विद्यार्थी गरिब भनेर हुँदैन, जेहेन्दार पनि हुनुपर्छ’ - Nepal's Digital News Paper
‘विद्यार्थी गरिब भनेर हुँदैन, जेहेन्दार पनि हुनुपर्छ’
एसईई नतिजा आएसँगै कक्षा ११ मा धमाधम भर्ना सुरु भएको छ । काठमाडौंको बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसले व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र भर्ना खोलेको छ । विद्यार्थीहरू कुन शैक्षिक संस्थामा के विषय पढ्ने भनेर अन्योल पर्ने गर्छन् । विषयभन्दा पनि कलेज छान्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई सकस पर्छ । सहरमा शैक्षिक व्यापारी विद्यार्थी खोज्दै हिँड्छन् । सामुदायिक कलेजहरूमा पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने मान्यताबाट विद्यार्थी र अभिभाक ग्रसित छन् । तर, के सामुदायिक क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थी कमजोर हुन्छन् त ? यसै सन्दर्भमा बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. घमनसिंह खड्कासँग गरिएको छोटो कुराकानी :
एसईईपछि कुन कलेज र के विषय पढ्ने भन्ने अन्योलमा रहेका विद्यार्थीलाई तपाईं के सुझाव दिनुहुन्छ ?
एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै शैक्षिक माहोल तातेको छ । मेमी–महाकालीका विद्यार्थी भाइबहिनी उज्यालो भविष्यका लागि कलेजको खोजीमा छन् । पहिला ४–५ वटा कलेज भिजिट गर्नुहोस् । कुन विषय पढ्ने हो त्यो निश्चित गर्नुहोस् । कुन क्याम्पसको शुल्क कति छ ? अघिल्ला रिजल्ट कस्ता छन् ? पढ्ने वातावरण कस्तो छ ? आफूलाई कहाँ एडजस्ट गर्न सकिन्छ ? यी कुरालाई ध्यानमा राखेर कलेज छनोट गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।
बानेश्वर क्याम्पसमा चाहिँ कुन विषय पढ्न पाइन्छ ? अन्य भौतिक सुविधाको अवस्था के छ ?
कक्षा ११ र १२ मा व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा र विज्ञान संकाय गरी चार संकायको पढाइ हुने गरेको छ । विज्ञान संकाय स्थगित छ । तत्कालका लागि भने अरु तीन संकाय छन् । बिहानी र दिवा गरी दुई सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुन्छ । बिहान व्यवस्थापन र मानविकी अनि दिवामा तीनै संकायको पढाइ भइरहेको छ ।
न्यून र मध्यम आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीका लागि यो क्याम्पस लोकप्रिय छ । यो एउटा स्थापित संस्था बनिसकेको छ । हामीले मध्यम र न्यून आर्थिक अवस्था भएका भाइबहिनीलाई रिजनेबल फीमा अध्यापन गराउँदै आएका छौं । यहाँ गत वर्षको रिजल्ट हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । भौतिक संरचना राम्रो छ । पठनपाठनको वातावरण उपयुक्त छ । खेल्न चउर छ । सफा क्यान्टिन छ । यी सबै कुरा प्रायः मध्यमस्तरका परिवारलाई जगजाहेरै भएको विषय हो ।
शुल्कको कुरा गर्दा १५–१६ हजारमा एक वर्षको पढाइ पूरा हुन्छ । प्लस टु पढ्न मासिक शुल्क ७ सय मात्र छ । करिब अढाई सय विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन् । त्यसकारण मध्यम तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका तर जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि यो क्याम्पस उपयुक्त थलो हो ।
छात्रवृत्तिको मापदण्डचाहिँ के छ ?
पहिलो कुरा विद्यार्थी जेहेन्दार हुनुपर्छ । हामीले पिछडिएको क्षेत्र, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी आन्तरिक परीक्षा गराउँछौं । त्यसका आधारमा हामीले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछौं । त्यसकारण विद्यार्थी गरिब भनेर मात्रै हुँदैन, जेहेन्दार पनि हुनुपर्छ । कुनै सिफारिस चाहिँदैन । आन्तरिक परीक्षाचाहिँ पास गर्नै पर्छ । आन्तरिक परीक्षाको नतिजा हेरेर शतप्रतिशत, ५० प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्मको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइँदै आइएको छ ।
विद्यार्थी भर्नाको अवस्था के छ ?
क्रमिक रूपमा बढ्दै छ । बाढीपहिरो र खेतीपातीका कारण ग्रामीण भेगबाट विद्यार्थी बिस्तारै आउँदै छन् । अब भर्ना हुन आउनेको संख्या बढ्छ ।
यति संख्यामा मात्र भर्ना लिने भन्ने छ कि छैन ?
बिहानको सिफ्टमा ३ सयको हाराहारीमा भर्ना लिने गरिएको छ । दिउँसोको सिफ्टमा चाहिँ हजारभन्दा बढी पनि भर्ना लिन्छौं ।
स्नातक र स्नातकोत्तरमा विद्यार्थीेले के के पढ्न पाउँछन् ?
स्नातकमा वाणिज्य, शिक्षा र मानविकी छ । त्यसपछि एमएतर्फ समाजशास्त्र छ । एमबीएस पनि पढाइ हुन्छ ।
निजी कलेजले ठूलो मात्रामा शैक्षिक व्यापार गरिरहेका छन् । सामुदायिकले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक कलेजका अवसर र चुनौती के छन् ?
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक वातारण राम्रो चाहिन्छ । पढाउने शिक्षक राम्रो चाहिन्छ । अन्य स्रोतसाधन जसले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्छ ती पूर्वाधार पर्याप्त चाहिन्छ । महँगो र ठूला भवन भएकै आधारमा शिक्षा गुणस्तरीय हुँदैन । त्यो मान्यता गलत छ । शैक्षिक गुणस्तरको मापन रिजल्टमा हेरिएको छैन । खालि भौतिक रूपमा हाईफाई गरिएका आधारमा मापन गर्न खोजिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा भनेको त राम्रो रिजल्ट हो । राम्रो व्यवहार र सोच भएका विद्यार्थी उत्पादन गर्नुृ उत्कृष्ट शिक्षा हो । महँगा भनिएका कलेज पढेका विद्यार्थी देशभन्दा पनि विदेशका लागि तयार पारिन्छन् । त्यस्तो शिक्षालाई तपाईं गुणस्तरीय भन्नुहुन्छ कि देशका लागि काम गर्न सक्ने व्यावहारिक र शैक्षिक रुपमा पनि योग्य विद्यार्थीलाई ? हामी विद्यार्थीलाई व्यावहारिक रुपमा पनि सक्षम बनाउने गरी पठनपाठन गराउँछौं । बानेश्वर क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थी देशका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि फिट हुन्छन् ।
सामुदायिक कलेजसामु चुनौती पनि त्यतिकै छन् । ग्रामीण भेगबाट आउने विद्यार्थी धेरै हुने भएकाले समयमा फि तिर्न सक्दैनन् । विद्यार्थीहरु राजनीतिमा लाग्छन् भन्ने छ । बिस्तारै यस्तो समस्या कम हुँदै गएको छ । त्यसो त निजी कलेजको पनि चुनौती छ । शुल्क चर्को लियो भन्ने छ । शिक्षा घोकन्ते मात्रै भयो भन्ने छ । सामुदायिक विद्यालयको अवसर भनेको सेवा भावमा अध्यापन हुन्छ ।
सर्वाेच्च अदालतबाट न्यायाधीशको नभई पार्टी कार्यकर्ताको आदेश आइरहेको छ- जगत बराम
‘कांग्रेस यो पटक चुनावको प्रतिक्षा नै नगरी गाउँ-गाउँ पुुगेको छ’: प्रवक्ता शर्मा
‘अबको लडाइँ दलाल पुँजीवादसँग हो’